Dowlada Sweden maxay ka ogeyd arinta Soomaalida lagu xiray Jabuuti? | Somaliska
Dowlada Sweden maxay ka ogeyd arinta Soomaalida lagu xiray Jabuuti?
Wasaarada arimaha dibada Sweden ayaa qiratay in ay la socotay xaalada labo wiil oo Soomaali ah kuwaasoo haysta dhalashada Sweden kuna xiran Maraykanka ka dib markii uu ka kaxaystay wadanka Jabuuti. Wiilashaan oo bishii Augusti la sheegay in ay ka soo bexeen Muqdisho ayaa lagu xiray Jabuuti ka dib markii la sheegay in ay ka tirsanaayeen ururka Al-shabaab.
Qaraabada wiilashaan oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in wiilashaan ay ka tirsanaayeen Alshabaab balse markii lagu qabtay Jabuuti ay isaga soo bexeen Shabaab oo ay doonayeen in ay dib ugu soo laabtaan Sweden. Wasaarada arimaha dibada Sweden ayaa sheegtay in ay isku dayeen in ay dowlada Jabuuti ka codsadaan in wiilashaan Sweden gacanta loo soo galiyo balse arintaas ayaa ku dhamaatay “Fashil” sidaas waxaa yiri Anders Jörle oo ah afhayeenka wasaarada arimaha dibada Sweden.
Intii wadahadalka uu u socday Sweden iyo Jabuuti ayaa dowlada Maraykanka waxay wiilashaan u kaxaysatay New York iyagoo lagu eedeeyay in ay soo qaateen tababar argagixiso. Qaraabada wiilasha xiran ayaa sheegay in dowlada Sweden ay wax ka ogeyd qaadashada maraykanka isla markaana ay ogolaanshaha bixisay. Afhayeenka Wasaarada arimaha dibada Sweden ayaa diiday in uu cadeeyo in Sweden ay ogolaasho siisay Maraykanka iyo in kale.
Qareenka u doodaya wiilashaan ayaa sheegay in aysan wax dambi ah ka galin maraykanka isla markaana aysan cadeyn sababta lagu haysto raggaan. Si kastaba ha ahaatee, haddii lagu helo dambi argagixiso ayaa lagu xukumi karaa ilaa 30 sano oo xabsi ah.
Nolosha magaalada Boden
Masjid ku yaala Eskilstuna oo loogu hanjabay in la xirayo
Sweden oo gargaarka u kordhineysa abaaraha geeska Afrika
jimcaale wan kusalamay sxb wiilasha ma maraykanka qabatay mise jabuuti haday jabuuti qabatay maxa maraykanka faraha ugaliyay mise waxa kadexeeyo iskaashi islaam
naceeb ah hadba shacabka somaliyeed e heysta dhalashada iswedan e boqanayo wadankooda hooyo wa inaysan marin jabuuti
adeer swden maxay tahay waa wadan yaro aan amar lahayn
mesha usa qofka ay rabto way ka xaysan ayadoon cidna uga haybaysan taas ogaada somaliyey
Walal wiilashan TV-yada ayaan ka daawanay waxaana wahliyo wiil reer UK ah oo anigane uu qaatay mareykanku, sikastaba ha ahaatee dhalin yarada somaaliyeed waxa loo beegsanaa naceeb loo qabo soomalida iyo dadka soomaali oo laheed dowlad ka ciliso, dadwlad aad sharci ki siisay ma ahan dowladaada iyo dadkaadaba. Oo ku difaaci maayo, maalin aan fogeyn ayaan webside ka aqrinayay Mo Farax oo ka cabanaa baaritaano uu la kulmo markii uu dhoofi tago wali lagu haysto ama loo baaraaa somali ayaa ka soo jedaaa.
Tallo:- anigu waxaan ku talin lahaaa dhaan dadka soomaaliyeed in ay ka midoobaan cadawga oo ay gacmaha is qabsadaan si ay u helaan markale maqaamkii ay aduunka ka joogeen, waa in aan ka fogaanaa qabyaalada iyo calaadaha aan dhamaaneyn